Magaalada Muqdisho Oo laga Dareemayo Qabanqaabada Shirka Wada Tashiga Doorashada 2016 – STAR FM SOMALIA
Magaalada Muqdisho waxaa kasocda qaban qaabada iyo diyaar garow xoogan oo loogu jiro shir looga tashanayo Dooraashada 2016-ka sida loo wajahayo, waxaana shirkan ka qeyb galaya Madaxda Dowlada Federaalka iyo Madaxda Maamul Goboleedyada dalka ka jira.
Shirkan oo maalinta berito ah ka furmaya Magaalada Muqdisho waxaa horey u iclaamiyay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra’izul Wasaare Cumar Cabdi Rashiid, waxaana shirkan inta uu socdo looga doodi doonaa sida ugu macquulsan ee loo qaban karo doorasho aan qof iyo cod aheyn.
Waxaa lagu wadaa shirkan in ay kasoo qeyb galaaan Madaxda Maamul Goboleedyada dalka kuwaa oo qaarkood maanta soo gaarayaan Magaalada Muqdisho, waxaana wali la ogeyn in uu shirka kasoo qeyb gali doono Madaxweynaha Puntiland Cabdi Wali Gaas oo saluugsan shirkan.
Shirka waxaa sidoo kale goob joog u noqon doona kana qeyb galaya xubno kasocda beesha Caalamka, waxaana hada Magaalada Muqdisho kasocda diyaar garowgii ugu dambeeyay ee loogu jiro qabsoomida shirkan looga hadlayo aayaha Siyaasadeed ee Soomaaliya iyo doorashada lagu wado in dalka ka dhacdo sanada 2016-ka.
Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa si weyn u adkeeyay amaanka qeybo kamid ah Magaalada Muqdisho, gaar ahaan goobta loogu tala galay in shirkan uu beri ka furmo , waxaana si weyn magaalada Muqdiho looga dareemayaa hadal heynta shirkan looga arinsanayo nuuca doorasho ee dalka ka dhaceysa arka la gaaro 2016-ka.
Qunsulka Safaarada Soomaalida ee dalka Yemen Axmed Suudaani oo ka hadlay dadka soomaalida ah ee dalka yeman u laabanaaya